अन्धविश्वास र कुरीतिलाई ‘समाजवादी’ सरकारको वैधता !
काठमाडौं – बोक्सीको नाममा महिलालाई मलमूत्र खुवाएका घटना बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छन् । महिलामाथि हिंसा बढेपछि सरकारले बोक्सीलाई नेपाली समाजमा रहेको अन्धविश्वास र कुरीतिको रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ ।
बोक्सीको नाममा कसैलाई आरोप लगाउन पाइँदैन भन्ने सन्देश फैलाउन सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापनमार्फत राज्यले जनचेतना फैलाउन खर्च गरिरहेको छ । २१ औं शताब्दीमा बोक्सी प्रथाजस्तो मध्ययुगीन बर्बरताको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।
बोक्सी प्रथाजस्तो अन्धविश्वास र कुरीतिलाई कार्यकारी प्रमुख र उनकोे सल्लाहकारले वैधता दिएपछि यसले नेपाली समाजमा कोलाहल मच्चाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आइतवार बिहानै व्यक्त गरेका शव्दले अहिले बजार तातेको छ । उनले लेखेको ‘छौंडा’ शव्द कुरीतिसँग जोडिने शव्द हुन् । २१ औं शताव्दीको सभ्य समाजले यस्ता कुरा पचाउन सक्दैन ।
त्यस्ता तुच्छ शब्द कोप्रति लक्षित थिए भन्ने स्पष्ट भएको छैन । परन्तु सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त शव्दहरूले बोक्सीजस्तो कुप्रथालाई सम्झाइदिएको छ । बोक्सी प्रथाजस्तो अन्धविश्वासबारे थाहा नभएको नयाँ पुस्ताको मस्तिष्कमा जिज्ञासा जन्माइदिएको छ ।
धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्टहरू बोक्सी कुप्रथाका प्रसङ्ग कोट्याएर किन अन्धविश्वास र कुरीतिलाई मलजल गरिरहेका छन् ? स्वयं सत्तारुढ दलका नेता सल्लाहकारका कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन् ।
नेकपाकी सांसद एवं युवा नेतृ रामकुमारी झाक्रीले लेखेकी छिन्, ‘राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिको रूपमा यो उत्कृष्ट ट्विट हो । यो ट्वीट सत्ताको सामाजिक चरित्रको ऐना हो । सत्ता कसरी कता जाँदैछ ? अनुमान लगाउन लोकलाई गाह्रो पर्ने छैन अब । धेरै पहिले एउटा लोककथा पढेको थिएँ – द इम्पेरियस न्यू क्लोथ । आज सम्झँदैछु, सत्ता र उन्माद कस्तो हुन्छ भनेर ?’
प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि बेलाबखत बोक्सीका प्रसंग निकाल्ने गरेका छन् । जस्तो कि २०७५ फागुन १ गते काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले बोक्सीको उदाहरण दिए । नेकपाका २ अध्यक्षलाई दुईथरि कुरा सुनाउने र पार्टीमा फूट ल्याउन भइरहेका प्रयास थामिनसक्नु रहेको बताएका थिए ।
‘बाको कानमा गएर भन्ने – बा ! आमा बोक्सी छन् । आमाको कानमा गएर भन्ने – आमा ! बा जँड्याहा भइसके । दुवैले पत्याउँदैनन्, फेरि भन्ने – बा ! पत्याउनुहुन्न के गर्ने ? तर आमा भरे मुख सुँघ्न आउँछिन् ।
आमाको कानमा गएर भन्ने तपाईं पत्याउनुहुन्न गएर मुख सुँघ्नुस् न कस्तो गन्हाउँछ । नभन्दै आमाले गएर मुख सुँघ्छिन् । रक्सी त गन्हाएको हुँदैन तर बाउलाई पक्का हुन्छ कि मुख सुँघ्न आई, बोक्सी त रहिछ । यस्ता प्रयासहरू थुप्रो भएका छन् तर प्रयास नगरेपनि हुन्छ । न यहाँ आमाले मुख सुँघ्न जानेछिन्, न बाले बोक्सीको आरोप लगाउँछन् । यहाँ त्यो कुनै चल्नेवाला छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
परन्तु उनले २५ फागुनमा रौतहटमा गएर मधेशमा व्याप्त बोक्सी लगायतका अन्धविश्वास हटाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘यदि कोही साँच्चिकै बोक्सी छन् भने मलाई खाएर देखाऊ,’ गरुडामा आयोजित नेकपाको प्रदेशस्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘यदि कोही बोक्सी भएको भए चुनाव नै लड्नु पर्दैनथ्यो । विपक्षीलाई बोक्सी लगाइदिए मात्रै पुग्थ्यो ।’
उपर्युक्त दुवै उदाहरण पेश गर्नका लागि नेपाली महिलामाथिको कलंक सावित भइसकेको बोक्सी शव्द सापटी लिनुपर्ने थिएन । बोक्सी शव्द हटाउन राज्यले करोडौं लगानी गरिरहेको छ, बोक्सीका नाममा महिलामाथि भएका अमानवीय घटनाले विश्वमञ्चमा नेपालीको शाख गिर्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देशको नेता र अगुवा हुन्, उनीहरूबाट नागरिकले आदर्श सिक्ने हो । असार ३ गते पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियाले भाषा बिगारे भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । नेपाली मौलिकता र संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको समयमा आफ्नो पहिचान र मौलिकताको संरक्षण गर्नु जरुरी छ । मिडियालाई भाषा बिगारेको बात लगाउनुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई त्यो पाठ सिकाउनु जरुरी देखियो । समाजवाद निर्माण गर्ने भनेर लागेको सरकारका बेला जुनसुकै बहानामा जोप्रति लक्षित भएको भएपनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले व्यक्त गरेका शव्द चेतनशील समाजका लागि किमार्थ स्वीकार्य छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको टीम हेरफेर : सूचना चुहाउनेदेखि गुम...
प्रतिबद्धताको छैन खाँचो, कोसँग छ सीमा विवाद हल गर्...
निजामती क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत समस्या छ– नवनियुक्त मन्त्री त्रिपाठी